1.Used for diki batch mangé amplification maitiro ekuedzwa, inogona kushandiswa imwe kana rwendo. CORBITION PCR machubhu zvinoitwa kubva muUPS nhanho yekurapa Polypropylene. Machubhu ese anoenderana neyakajairika 96 tsime ndiro. Iyo dhizaini yakatetepa-madziro kuti kupisa kupisa kuchinjike. Kuisa chisimbiso chivharo kunodzivirira muyedzo kubuda. Machubhu anowanikwa mune akasiyana masimba eakasiyana sampuro yekuchengetedza.
0,1 ml, 0,2 ml, isina kuroorwa uye zvisere zvisere, yakajeka uye chena mavara, akati wandei makapeti uye akapindirwa makepi anogona kuva sarudzo. 0,1 ml machubhu anowanikwa mune opaque chena yekuwedzera chiratidzo muyero yekuedza. PCR chubhu zvigadzirwa zvakanaka zvekutsanya PCR uye yakaderera vhoriyamu kuita. All machubhu haana DNase-emahara, RNase-yemahara, isiri-pyrogenic.
2. Octet PCR kutonga maitiro
Hunhu hwechigadzirwa hachipatsanurike kubva mukugadzirwa. Yepamberi yekugadzira tekinoroji uye yakakwira chaiyo michina ndiyo fungidziro yehunhu hwechigadzirwa. PCR kuyedza kunonyatso tarisa kumadziro ukobvu hwePCR zvinhu, uye Ultra-yakatetepa uye yunifomu madziro ukobvu unodiwa inodiwa kuverengera yekudziya module. Kupisa kwakaendeswa zvakaenzana kumasampuli mumaPCR octuplets kuti awane chokwadi chemiedzo yekuyedza.
3, inotariswa nechiedza,
Nekuda kwehunhu hwezvizhinji zve fluorescent zvakawandisa PCR zviridzwa, nzira yechiedza inoda kuitiswa kubva kumusoro kweinogoneka kusvika mukati meiyo chubhu, saka semi-pachena kwezvinoshandiswa zvinoda kuve zvakanyanya kukwirira.
Kuiswa chisimbiso kwechubhu yekuvhara uye chubhu muviri kunofanirwa kuve kwakanyanya kunaka kudzivirira muyenzaniso kubuda kwemvura mutubu, kudzivirira kusvibiswa kwemuchinjikwa, uye kuona kururamisa kwemhedzisiro yekuyedza!
5. Nzvimbo yekugadzira
Nemidziyo yakanaka, musangano wakachena wakakoshawo. Kana iyo sampuro yakasvibiswa nezvinhu zvakasviba, mhedzisiro yacho ichave isina kunyatsojeka. Chikonzero chekuferefeta chinotora nguva uye chinoda basa. Strict kugadzirwa kwemhando yekudzora kunogona kuve nechokwadi chekuita kweimwe neimwe batch yezvigadzirwa. Yakadzikama kuve nechokwadi chekururamisa uye kudzokorora kweyedzo yekuyedza
1.Selection yekukwirisa kwekunze kupinza polypropylene zvinhu, hapana kunaya.
2.Hapana DNA kana RNA enzymes.
3.Iyo yakasviba-yakatetepa yunifomu chubhu rusvingo inoonekwa neyakajeka mold dhizaini. Iyo yakasviba-yakatetepa yunifomu chubhu rusvingo inopa yakanakisa kupisa conduction mhedzisiro uye inosimudzira kuwedzeredza kwesampuli yekuwedzera.
4.Cover zvakasimba inonamira pombi kudzivirira kusvibiswa.
5.Iyo chigadzirwa inokodzera kwakawanda fluorescent PCR zviridzwa.
6.Made kubva muUPS Plastiki Kirasi VI Polypropylene.
7.Iyo inowirirana neyese 96 tsime ndiro
8.Thin-rusvingo rwekupisa kupisa kuri nani Inowanikwa mune yakajeka uye chena ruvara, flat cap uye domed cap
9.Tight yekuisa chisimbiso chivharo dhizaini yekudzivirira sampu yemvura
10.Sterile kusvika SAL nhanho 10-6
AIHWA. Tsananguro Vhoriyamu Cap Tsananguro Kurongedza Mbereko
PC1001 PCR Tube 0.2ml Flat kana Dome Kuroora kana kuroorwa 20000 / Ctns sarudzo
PC0021 8-tsime PCR tambo 0.2ml Flat 8 Strip 5000 / Ctns sarudzo
PC0050 Micro PCR chubhu 25ul Flat Kuroora kana kuroorwa 12000 / Ctns sarudzo
PC0051 8-tsime PCR tambo 0.1ml Flat 8 Strip 5000 / Ctns sarudzo
PC0059 PCR chubhu 0.1ml Flat Kuroora kana kuroorwa 2500 / bhegi kana 10000 / bhegi sarudzo
Pashure: Pipette matipi
Zvadaro: PCR ndiro
PC0021 0.2ml 8 bvisa PCR chubhu
PC0050 25ul micro PCR chubhu
PC0051 0.1ml 8 bvisa PCR chubhu
PC1001 0.2ml PCR chubhu & dome chivharo
Utachiona DNA / RNA Extraltion kit (Column)